पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला बेवास्ता नगर्नुहोला पढेर ॐ लेखि शेयर गरौं – Naya Kura Daily
पाँचसय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला बेवास्ता नगर्नुहोला पढेर ॐ लेखि शेयर गरौं
November 29, 2020 289
काठमाडौं बाङ्गेमुढास्थित ओलाछी टोलमा रहेको गणेश मन्दिर पुन निमार्णका क्रममा पुरानो ढुङ्गाको गणेशको मूर्ति फेला परेको छ ।मन्दिर पूनर्निर्माणका क्रममा पित्तलको गणेशको मुर्ति उप्काउंदा पछाडि ढुगांको करिब पाँच सय वर्ष पुरानो गणेशको मुर्ति फेला परेको होअसावधानीका कारण उक्त मूर्ति भने टुक्रिएको छ । टुक्रिएको मूर्ति पुरातत्व विभागको सहयोगमा जोड्न लागेको स्थानीय कृष्णप्रसाद मानन्धरले बताए । हजुरबुबा तुलसी नारायण माननधरले २०२२ साल तिर न्यास पूजा गरि ढुगांको पुरानो मुर्ति माथि पितलको गणेशको मुर्ति स्थापना गरेको उहांको भनाइ छ । फेला परेको गणेशको मुर्ति दुई हाते हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।आइतबार : पुरुष : आइतबार जन्मिने मानिस भाग्यशाली हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता ब्यक्ति कम बोल्ने र कला र शिक्षामा अगाडी हुन्छन् । यो बार जन्मिने ब्यक्तिमा धार्मिक आस्था पनि हुन्छ र घर परिवारका सदस्यलाई खुसी राख्न अधिक प्रयास गर्छन् । तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ
स्त्री : आइतबार जन्मिने स्त्री दान-पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् । द्द।सोमबारः पुरुष स् सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ ।सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ । स्त्री : सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।मंगलबारः पुरुष : मंगलबार जन्म हुने ब्यक्ति सामान्यतया धनी हुन्छन् । यस्ता ब्यक्तिको स्वभाव उग्र हुन्छ । यसै कारण उनीहरुसँग मानिसहरु वेखुसी हुन्छन् । यिनीहरुलाई छाला सम्बन्धी रोग हुन सक्छ । दुख र सुख आउने जाने भैरहन्छ । स्त्री : ज्योतिषका अनुसार मंगलवार जन्म भएका स्त्री कठोर हृदयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा दया माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।
बुधबारः पुरुष : बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा मन भएका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ । स्त्री : बुधाबार जन्मिने स्त्री कुनै विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छतन् । सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् ।विहीबार : पुरुष विहीबार जन्मिने पुरुष विद्वान र पराक्रमी हुन्छन् । यिनीहरुले जीवनमा धेरै उतार चढाव र समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । तर पनि साहसी हुन्छन् । यिनीहरुसँग संगत हुनेहरु खुसी हुन्छन् । विहीबार जन्मिनेहरुलाई ७, १२, १३, १६ र ३० वर्षमा संकट पर्छ । स्त्री जुन स्त्रीको विहीबार जन्म हुन्छ त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन्शुक्रबार : पुरुष : शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बुद्दीमान र मृदुभाषी यिनीहरुको स्वभाव हो ।यिनीहरु सहनशिल पनि हुन्छन् । यिनीहरु शौखिन हुन्छन् र २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट हुन्छ । स्त्री : कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चंचल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
Prevअचम्मको झरना, जहाँ बषौदेखि आगो बलिरहेको छ ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।
Nextसपनामा सर्प देख्नुभयो ? यस्तो हुन सक्छ संकेत ! ॐ लेखी शेयर गरौं
चर्चित नायक अर्जुन कपुरलाई पनि कोरोना संक्रमण
भक्तपुरका कोरोना संक्रमितको धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु
बिहानै भयो नेपालमा यस्तो अचम्मको चमत्कार भगवान !
तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (3498)
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (3435)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (3060)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (2461)
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले कोशीको एउटै माछा ६० केजी तौलसम्म बगाएर बगरमा ल्याएको छ (1749)
मानव बलि दिए कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भईन्छ भन्ने सपनामा दर्शन पाएँ त्यसैले दिएँः पुजारी ओझा (1665)